Astgbụ – The Tailoress
Ileghara Basting ji invisibly itinye otu mpempe ákwà ọzọ. Mma maka iji na-akpa ákwà ebe nakawa etu ma ọ bụ n'ọnyá dị mkpa ka a ekwekọghị. N'ogige atụrụ na pịa onuete òkè nke n'elu ákwà. Pin jidesie onuete òkè nke n'okpuru ákwà. -Arụ ọrụ ikike ekpe. Secure anụnụ. Were ihe dịka 1cm kpachie site n'okpuru ákwà wee gafee […]